Fanavaozana an'i Meltwater Buzz: Fanamafisana, lanja ary fahefana | Martech Zone
Fanavaozana an'i Meltwater Buzz: Fanamafisana, lanja ary fahefana
Asabotsy, Septambra 21, 2013 Asabotsy, Septambra 21, 2013 Douglas Karr
Matetika ny olona manontany ahy hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika mahita sy manoratra momba ny teknolojia marketing be dia be any. Marina fa somary natsangan'ny mpiasan'ny fifandraisana amin'ny besinimaro ihany isika Martech Zone Tsy tranokalam-baovao - tranokala iray izahay hanampiana ireo mpivarotra hahita teknolojia azon'izy ireo ampiasaina. Ny ankamaroan'ny fitaovana zarainay dia efa nisy hatry ny ela - saingy mizara fomba fiasa na endrika izay heverinay ho sarobidy amin'ny mpihaino izy ireo.
Izay fanaonay matetika tamin'ny Google Alerts dia ataontsika miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminay amin'ny Meltwater. Meltwater Buzz ny mailaka dia tototry ny fampahalalana tsy mampino… fitaovana sy sehatra matetika izay mbola tsy nozarainay taloha mihitsy. Ary hitantsika momba ny teknolojia amin'ny fotoana tena izy fa tsy amin'ny herinandro.
Manampy antsika amin'ny lafiny maromaro izany:
mpifaninana - manome ny mpanjifanay vaovao momba ny mpifaninana vaovao sy misy izahay, manampy azy ireo hiomana sy hametraka ny vokatra azy ireo mifanaraka aminy.
Statistics - Tsy vitan'ny hoe lasa manam-pahalalana bebe kokoa isika rehefa mamaky tranga, tantara momba ny mpanjifa ary vaovao momba ny marketing, fa afaka mampita izany vaovao izany amin'ny mpanjifantsika sy mpamaky anay.
Zavatra Hita - Mazava ho azy, ity no henan'i Martech - mizara lahatsoratra momba ny teknolojia ara-barotra izay tsy asehon'olon-kafa… tsy misy olona izahay.
Amin'ity lahatsoratra ity dia tsy hizara momba ny tranokala Meltwater Buzz aho… ny fanairana fotsiny azontsika. Ny mailaka tsirairay dia manomboka amin'ny famaritana ny fangatahana voajanahary nampiasaina sy ny loharano izay nanana vaovao. Hasehoko anao ny kinova faran'ny herinandro ka tsy mavesatra loatra. Ity misy fanentanana iray namboarinay Marketing finday.
Izahay dia mitady finday-barotra ary ny boolean mitambatra sehatra or teknolojia. Nanampy teny fanampiny izahay hanadiovana ny valiny ary hialana amin'ny zavatra toy ny fametahana asa ny valiny. Mampiseho amintsika ilay mailaka fa nisy lahatsoratra bilaogy 2, 2 voalaza tao amin'ny Twitter ary 2 no voalaza tao amin'ny Facebook. Avy hatrany dia eto ambany ny rahona resadresaka izay manome lanja ireo andianteny.
Ny fizarana manaraka dia manome ny valiny miaraka amin'ny lanjan'ny lanjan'ny laza (amin'ny fomba fijery) ary ny fahefana (laharana) ny valiny. Azonao atao ny mahita ny crappy mention up top manana ny lazany 0 sy ny laharana 0 - mora tsinontsinoavina. Avy eo misy ny firesahana ny momba antsika Mobile Marketing Infographic - mahafinaritra ve izany? Lahatsoratra iray hafa nataon'i ShopperTrak no nanaitra ny sasany fihetsika mahaliana an'ny tanora sy ny marketing amin'ny finday avy amin'ny Pew Research.
Ny bokotra volamena; na izany aza, dia fanavaozana ny pejy Facebook momba ny kopia maimaimpoana voafetra (Kindle Only) an'ny Hevitra nomerika: zavatra 12 Mila fantatry ny orinasa rehetra momba ny varotra niomerika avy amin'ny WSI. Afaka nampita ny tolotra tamin'ny mpamaky sy ny mpanjifako rehetra aho.
Tamin'ny alàlan'ny mailaka tokana avy amin'i Meltwater Buzz, nahafahako nampianatra ny tenako momba ny fahazarana amin'ny fivarotana finday ho an'ny zatovo, misaotra ny mpanaraka iray nizara ny infographic-ko, ary nandefa ebook mahafinaritra ho an'ny mpanaraka anay rehetra. Mailaka iray izany amin'ny faran'ny herinandro! Alao an-tsaina ny zavatra azonao atao ho an'ny orinasanao sy ny mpanjifanao amin'ity fahaizana ity!
Tags: curationcurationfanairana mailaka
Woopra: Analytics amin'ny fotoana tena izy, azo ampiharina
WPide: Plugin amin'ny famoahana rakitra mahafinaritra ho an'ny WordPress